Halkan ayaad joogtaa: Hoyga>Ku saabsan Beilida
Beilida waxaa la aasaasay 1999 iyada oo ah magaalo ka diiwaan gashan 46 milyan yuan.It waxay leedahay saldhigyo wax soo saar iyo warshadeyn gobolada ugu waaweyn ee dalka, oo leh 340,000 mitir murabac oo dhismeyaal warshad ah iyo in kabadan 400 oo shaqaale. yuan, waa mid ka mid ah xirfadleyda caalamiga ah ee heerka sare ah ee GRC / UHPC / GRG / FRP / TCP iyo shirkadaha wax dhisa oo leh awood wax soo saar sanadle ah oo dhan 500 milyan mitir oo laba jibaaran. Qaybta qoritaanka tayada ee warshadaha tayada leh ee GRC.Beilida waa warshado, xirfad-yaqaan, farsamo leh, shirkad caqli-gal iyo xog-ku-saleysan oo isku-darka cilmi-baarista iyo horumarka, qaabeynta, soo-saarka, rakibaadda iyo adeegga qaab dhismeedka baqshadda cusub ee GRC iyo qaab-dhismeedka UHPC iyo isku-darka shaqooyin badan qalabka derbiga.
Beilida iyada oo loo marayo cilmi-baaris qoto dheer iyo horumarin iyo hal-abuurnimo, adeegsiga teknolojiyada microwave, teknolojiyadda nano, teknolojiyad noocyo badan leh, teknolojiyada 3 d, teknolojiyada caqliga leh, iwm. qalabka GRC, ayaa beddelay qaabka dhaqameed ee wax soo saarka iyo rakibaadda dhismaha, oo si guul leh loogu adeegsaday dhismayaasha waaweyn ee guryaha, goobo dadweyne oo aad u sarreeya - nanjing youth Olympic center, changsha mei sihu dhaqanka iyo xarunta farshaxanka, hoteelka Macao Venetian, changzhou dino biyaha magaalada, tangshan meelaha saddexaad, yinchuan, wuhan xinhai kacaanka memorial hall, qian xuesen memorial matxaf, iwm; Mashaariicda dibedda waxaa ka mid ah dalxiiska Mareykanka, masjidka Algerian, Qatar luul, iwm mashaariicda UHPC sida Shanghai Conservatory of music, magaalada shenzhen yuecai magaalada iyo yuhang. tiyaatarka weyn waxaa si balaadhan looga isticmaalaa qaybaha kala duwan ee naqshadaha, iyagoo noqonaya moodalka iyo hanashada Shiinaha shirkadaha dhismaha iyo magaca sumcada warshadaha GRC.
Sannadkii 2008, biraeta waxaa la siiyay shirkad heer sare ah oo ka timid ururka caalamiga ah ee GRC, iyo sanadkii 2015, biraeta waxaa lagu abaal mariyey abaalmarinta caalamiga ah ee warshadaha GRC oo ay bixiso ururka caalamiga ah ee GRC.
Waxaa loo dhoofiyey in ka badan 100 dal
Xakameynta alaabada cilladaysan gudaha 3%, ballanqaadkeenna!
OEM, ODM waa la aqbali karaa
Ka bixida 30ka maalmood ee badda dhexdeeda, 7da maalmood si dhakhso ah loogu soo diro hawada ama si cad
Amarka Yar ee La Aqbali Karo
Qalabka badeecada 300 ee alaabta, amar yar ayaa la aqbalaa, amar kasta si wanaagsan ayaan ula dhaqanaa
Waxaan aqbalnaa 6 nooc oo ah habka lacag bixinta, tusaale ahaan. TT, L / C, D / A, D / P, Western Union, Paypal